लघुकथा: जन्मोत्सव « Sansar News
९ श्रावण २०७८, शनिबार ०७:०९
आर्यनको जन्मदिन भएकाले हरिहरको घरमा एक–दुइजना गर्दै छरछिमेकी र आफन्त आउने क्रम सुरू भइसकेको थियो । बैठक कोठामा रङ्गीचङ्गी झिल्झिले कागज र बेलुन (फुक्ना) टाँगेर सजाउने काम सिद्दिसकेको थियो । कमि थियो त सिर्फ हरिहर र उनले ‘म लिँदै आउँछु’ भनेको केकको ।
आर्यनकी आमा मनिषा खानेकुरा बनाई तुल्याई गर्ने काममा भान्से बसेकी नरमायालाई सघाई रहेकी थिइन् । आर्यन आफ्नो जन्मदिन मनाउँन आएका दामलेहरुसँग आफ्नै पारामा खेलिरहेको थियो । मनिषा मनमनै ‘बोलाए जति सबै आइसके, आजै चै कस्तो ढिला गरेको होला पापाले !’ भन्दै बारम्बार बाहिर निस्कदै आफ्ना श्रीमानको बाटो हेर्दै छट्पटाइरहेकी थिइन् ।
आएका पाहुनाहरू पनि अब त साँझ पनि झमक्कै भइ भैसक्यो, कार्यक्रम कति बेला सुरू गर्ने होलान् भन्दै एकआपसमा खासखुस गर्न थालिसकेका थिए । सबैको धैर्यताको बाँध भत्काउँदै हरिहरले घरको गेटमा आई कारको हर्न बजाएपछि पाले शान्तिरामले गेट खोल्नासाथ हरिहरको कार हुइँकिदै आएर ग्यारेजमा रोकियो ।
‘आइ एम सरी एभ्रीवन’ भन्दै हरिहर कारबाट ओर्लिएर सरासर घरभित्र छिरे भने उनको डाइभर दलबहादुर पनि केक लिएर हरिहरलाई पछ्याउँदै भित्र छिर्यो । भित्र पुगेर हरिहरले आफ्नी श्रीमती मनिषालाई सोधे ‘यो केक कहाँ राख्ने मामु ?’ मनिषा भान्साबाटै कराइन् ‘टेवलमा ट्रे छ नि, त्यहिँ राखिस्यो न !’ मनिषाको आवाज सुनेको दलबहादुरले टेवलको ट्रेमा लगेर सरक्क केक राख्यो ।
हरिहर आइपुगेको केही बेरपछि अब कार्य सुरु गर्ने भनेर सबै बैठक कोठामा झुम्मिए । हरिहरले केकको वरिपरी एघार वटा मैनवत्ति सजाएर सल्काउँदै आजै मात्र दशवर्ष पुगेर एघार लागेको आर्यनलाई ‘अब सबै मैनबत्ती फुकेर निभाउ बाबु’ भन्नासाथ छेउमा उभिएका साहिँला बाजे कड्किए–‘के उल्का गर्न लागेको हँ हरिहर ?
काम पाउनु छैन जे पायो त्यही पो गर्न खोज्दा रहेछन है ! यस्तो शुभ कार्यमा बलिरहेको बत्ति निभाउन हुन्छ हामी हिन्दुले ?’ साहिँला बाजेको कुरो सुनेर छक्क परेको आर्यनले आफ्नो बाबुको मुखमा हेर्दै सोध्यो– “यो हिन्दु भनेको के हो पापा ?’